/ဘ‌‌လော့ခ်/Pregabalin/Primobolan Steroid တစ်မျိုးသံသရာဖြတ်တောက်အတွက်အများဆုံးအသုံးများဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်
အပေါ် Posted 12 / 12 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Pregabalin.
1. Primobolan ဆိုတာဘာလဲ။ Primobolan ၏ 2.The အကျိုးသက်ရောက်မှု
3.Primobolan စက်ဘီးနှင့်အသုံးပြုမှု 4.Primobolan သောက်သုံးသောနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး
bulk သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် 5.Primo 6.Stacking Primoblan
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ 7.Primobolan 8.Primobolan ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
၉။ စစ်မှန်သော Primobolan ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူရမည်နည်း။
AASraw သည်စစ်မှန်သော Methenolone / Primo Enanthate အမှုန့်ကိုပေးသည်။
（Methenolone Acetate） Primobolan ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဗီဒီယို
| ။ (Methenolone Acetate) Primobolan ကုန်ကြမ်းအမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Methenolone Acetate / Primobolan
1. Primobolan ဆိုတာဘာလဲ။
Primobolan (စ Metenolone အဖြစ်လည်းရေးထားလျက်ရှိ၏) ထို anabolic steroid Methenolone များအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုထိုးဆေးဆီအခြေခံသည့်ပုံစံနှင့်ပါးစပ်ဖြင့်နှစ်မျိုးလုံးရနိုင်သည်။ ထိုးသွင်း Primobolan အဖြစ်လူသိများသည် Methenolone Enanthate, နှင့်ပါးစပ်ပုံစံအဖြစ်လူသိများသည် Methenolone Acetate။ ဒါဟာကြောင့်တစ်ဦးဟိုနှင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်က၎င်း၏အလွန်ပျော့သဘောသဘာဝဖို့ရန်အလွန်လူသိများတဲ့နှင့်လူကြိုက်များဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Primobolan အများအပြားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ထူးခြားသောကြောင်းတစ်ခုပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ပါးစပ်ဟို steroids။ ကျမတို့ကလည်းဘယ်ထပ်မံသွားရမီ, ကျွန်တော် Primobolan နှင့် Primobolan Depot အကြားခြားနားချက်ကိုခွဲခြားအရေးကြီးပါတယ်။ Primobolan Depot ကြီး / ရှည်လျား Enanthate Ester မှပူးတွဲပါကြောင်းဟော်မုန်းတစ်ခုထိုးဆေးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ Primobolan Methenolone အတွက်တူညီတက်ကြွတီးရွိုက်ဟော်မုန်းများဖွဲ့စည်းလျက်ရှိ၏ သို့သော်ကသေးငယ်တဲ့ / ရေတို Acetate Ester မှပူးတွဲပါနှင့်ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Primobolan ၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည် အလုံခြုံဆုံးဟို steroids စျေးကွက်အပေါ်ကဤပြောဆိုချက်ကို back ဖို့အကောင်းဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သယ်ဆောင်။ တကယ်တော့ဒီ Steroid တစ်မျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲသိရပါကလေးများနှင့်အချိန်မတန်မီမွေးကင်းစဆက်ဆံဖို့ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအရိုးပွရောဂါနှင့် sarcopenia များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Primobolan ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရောဂါများဖြုန်းကြွက်သားများနှင့် corticoid ဟော်မုန်းရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံနေပါတယ်။ ဒါဟာအစအာဟာရချို့တဲ့မှုကိုကုသအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
ကုထုံးကုသမှုအစီအစဉ်များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားခြင်း, Primobolan အလွန်ဖြစ်ပါသည် လူကြိုက်များဟို Steroid တစ်မျိုး အားကစားသမားတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကြား။ အဆိုပါခံတွင်းဗားရှင်းတစ်အများကြီးအားနည်းလာကြတယ် pack မှာအဖြစ်သို့သော်ထိုးဆေး Depot ဗားရှင်း ပို. ရေပန်းစားသည်။ ကာယဗလအဘို့, ထိုးဆေး Methenolone Acetate ဦးစားပေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးထိုးဆေး Acetate ဗားရှင်းကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ပါးစပ် form မှာကန့်သတ်နေချိန်တွင်ထို့ပြင်, Methenolone ဟော်မုန်းသူ့ဟာသူ, ပိုလေ့ရှိဟို steroids အတုလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအများအပြားမြေအောက်စျေးကွက်များတွင်လည်းမျှမျှတတစျေးကြီးသည်။ ဒါဟာဟော်မုန်း Arnold Schwarzenegger ရဲ့အကြိုက်ဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။ ဘယ်လောက်အမှန်တရားသာသူပြောနိုင်ကြောင်း၌တည်ရှိ၏, ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းဟော်မုန်းနှင့်သူဘယ်လိုအသုံးပြုအပေါ်သူ၏ခံစားချက်များကိုအကြောင်းကိုတိယူဆချက်စေရန်များစွာသောအဘို့လောက်ပေ၏။ ကြှနျုပျတို့သိကြပါတယ်။ ဒါဟာအစမျှမျှတတမြင့်သောဒီ Steroid တစ်မျိုးများအတွက်ဝယ်လိုအားကိုစောင့်ရှောက်အဖြစ်အတုနှင့်အတူစျေးကွက်ဒဏျခတျဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲ့ပါတယ်။
ဝယ်လိုအားအပေါ်အရေးပါသောမှတ်ချက်; ဒီ Steroid တစ်မျိုးများအတွက်ဝယ်လိုအားကြောင့်၎င်း၏အလွန်အမျိုးသမီးဖော်ရွေသဘာဖို့လည်းမြင့်မားသည်။ ဒီအမြိုးသမီးမြားအောင်မြင်မှုမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်အတူသုံးနိုငျအနည်းငယ်ဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ Primobolan တူသော steroids နှင့် Anavar အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှုအဘို့ထိုသူတို့စုံလင်သောအောင်ကအရမ်းနိမ့် virilization ratings သယ်။
Primobolan ၏ 2.The အကျိုးသက်ရောက်မှု
Primobolan အချို့ကိစ္စများတွင်ရောဂါများဖြုန်းကြွက်သားကုသရန်အသုံးပြုသည်, သို့သော်ပုံမှန်အားပျော့ကိစ္စများတွင်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာတစ်ခုကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးမယ့်အကျိုးကျေးဇူးသာ။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးနဲ့တူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပေါ်ထုပ်ပိုးသွားမထားဘူး Anadrol or Deca Durabolin အများစုယောက်ျားတစ်ဦးကိုချွတ်-ရာသီ bulk သံသရာအတွက်ကြောင့်အများကြီးအသုံးပြုမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်တို့သည်သို့သော်အမျိုးသမီးတစ်ဦးခြွင်းချက်စေနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများ ပို. ထိခိုက်မခံတဲ့ဟိုစတီရွိုက်မှဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးပျော့ဟို Steroid တစ်မျိုးတစ်နည်းနည်းရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရုံအရေးကြီးသောအဖြစ်အများဆုံးအမျိုးသမီးတွေနေ့ချင်းညချင်းအလေးချိန်၏ 30lbs ရဖို့ရန်ရှာနေကြသည်မဟုတ်။ အလေးချိန်အတွက်အသေးစား, အလယ်အလတ်တိုးမကြာခဏမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ စိတ်ထဲအတွက်ပျော့သဘောသဘာဝ Keeping, စစ်မှန်သော Off-ရာသီစက်ဝန်းအဘို့ဤ Steroid တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုဖို့သူအပါဆုံးယောက်ျားစိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။
Primobolan အမှန်တကယ်တစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏ထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်ဘယ်မှာ steroid တစ်မျိုးဖြတ်တောက်။ အလို့ငှာ ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးကျွန်တော်တို့ဟာလောင်ထက်ပိုကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ရကြမည်။ လုံးဝလိုအပ်သောနေစဉ်တွင်, ဒီကိုလည်းအလွန်ကြီးစွာသောအန္တရာယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိန်ကြွက်သားထုထည်ကိုထည့်လေ့မရှိ။ တစ်ဦးဟိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်တကယ်တော့စီစဉ်ထားလျှင်ပင်ဿုံတစ်ဦးအဆီဆုံးရှုံးမှုအစားအစာအချို့ပိန်ကြွက်သားတစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှထိုကဲ့သို့သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူအနည်းငယ်တစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဟိုအေးဂျင့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သင်ပြောပြသင့်တယ်သောဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အောင်မြင်သော Diet ဖို့ key ကိုရိုးရှင်းစွာအလေးခြိနျဆုံးရှုံးပေမယ့်သင့်ရဲ့ကြွက်သားထုထည်ကိုကာကွယ်နေစဉ်တွင်အဆီဆုံးရှုံးသည်မဟုတ်, ဤအကြီးစွန်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံမထားဘူးဆိုရင်, သင့်တဲ့အစားအစာအောင်မြင်သောမရှိခဲ့ပါ။ ရေတွင်းတစ်တွင်း-စီစဉ်ထားတဲ့အစားအစာနှင့်အတူ, Primobolan သင်ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဒါဟာအစအချို့မျှမျှတတကောင်းတဲ့အေးစက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ Primo ကိုအသုံးပြုဖို့သူများသည်မကြာခဏခက်ခဲပြီးပိုသတ်မှတ်ပေါ်လာပါသည်။ သို့သော်အများစုမှာ Depot ဗားရှင်းဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်တွင်ပိုမိုထိရောက်စေခြင်းငှါရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒီအမြိုးသမီးမြားပါဝငျသညျ။
Primobolan ကိုလည်းကောင်းစွာအားကစားစက်ဝိုင်းထဲမှာတန်ဖိုးထားသည်။ ခွန်အား၌တစ်ဦးကအလယ်အလတ်တိုးတက်မှုကဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ခွန်အားအာဏာနှင့်မြန်နှုန်းမှအောင်မြင်သော athleticism မှ key ကိုဒြပ်စင်နှစ်ခုလုံးကိုရညျညှနျးနိုငျသညျ။ သို့သော်ဤ Steroid တစ်မျိုးအမှန်တကယ်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကိုလည်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီးယင်းသို့စရိုက်များသူတို့အများအပြား steroids နှင့်အတူကဲ့သို့ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေစဉ်ကိုမဆိုထုရိုက်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမဖုထက် သာ. ကောင်း၏။ ကပျော့ Steroid တစ်မျိုးရဲ့အဖြစ်ထပ်မံသည်, အားကစားသမားအရွယ်အစားကြီးမား buildups နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ထည့်သွင်းအရွယ်အစားအများကြီးအားကစားသို့မဟုတ်အနေအထားကို မူတည်. စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သည်အခြားကိစ္စများတွင်ပါကမျက်စိ prying နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှမလိုအပ်သောအာရုံကိုအများကြီးယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး bulk အဆင့်စဉ်အတွင်း Proviron တစ်ဦးအခြေခံ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်မဟုတ်, ဆုံးနဲ့လူတို့သညျအဘို့အကတစ်ဦးကိုချွတ်-ရာသီစက်ဝန်းတစ်နေရာရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီမှာခြွင်းချက်ဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့ကဒီမှာသူတို့အားကူးပါလိမ့်မယ်။ Proviron အတွက်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်သည်သူ၏သံသရာစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုများတစ်ဦးအဓိကအတားအဆီးကကူညီနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးသံသရာအတွက်တစ်ချိန်ချိန်နှင့်အချိန်မှာတိုးတက်မှုမဆုတ်ဖို့အစပြုနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ပြည့်စုံရပ်တန့်ထံသို့လာကြ၏။ Proviron တစ် stack ထဲမှာကိုအသုံးပြုထားကြောင်းအခြား steroids ၏စုစုပေါင်းအခမဲ့ပြည်နယ်ပိုကောင်းစေပါတယ်စကားမစပ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒီအဓိကအတားအဆီးဟာတစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုများကိုကူညီနိုင်ဘူး။ အများဆုံး testosterone ဟော်မုန်း၏အကြီးဆုံးသောငွေပမာဏကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ရှိရာ Off-ရာသီစဉ်အတွင်း, ဒီဖြစ်ပါသည်။ အတော်များများလည်းသံသရာဖြတ်တောက်ကာလအတွင်းကြီးမားသောပမာဏကိုအသုံးပြုဖို့အထူးသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ကာယဗလပေမယ့်အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းအစီအစဉ်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းပိုပြီးဘုံများမှာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကန့်သတ် testosterone ဟော်မုန်းဆေးများနှင့်အတူ Off-ရာသီသံသရာကို run ဖို့ရှေးခယျြသူမြောက်မြားစွာအကြောင်းပြချက်များအတွက်သူများရှိပါသည်။ Proviron အပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များအတွက်သူတို့ကိုအနည်းငယ်လိုအပ်သောအန်ဒရိုဂျင်ထပ်တိုးပေးနိုင်ဘူး။ အမြဲတမ်းလိုအပ်သောမည်မဟုတ်ပါနေစဉ်ကအကျိုးရှိသောဖြစ်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
Primobolan သံသရာ အဆီဆုံးရှုံးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ၏ပုံစံအတွက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ bulk သို့မဟုတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်-ရရှိမှုအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုနီးပါးဘယ်တော့မှသည်နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအများဆုံးတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုပြပွဲသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအထိဦးဆောင်၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်တစ်ဦး Pre-ပြိုင်ပွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ form မှာဖွစျပါတယျ။ ဒါဟာပုံမှန်အားအလားတူအရည်အသွေးတွေ, ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဝက်ဘဝတွေကိုကိုင်သောအခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူစက်လီးစီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကကာယဗလမကြာခဏ testosterone Propionate (သို့မဟုတ် testosterone Enanthate) နဲ့ Primobolan သီးနှံများကိုပုံနှင့်အနိမ့်အတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှု၏ကာလအတွင်းမှာကြွက်သားထုထည်၏ retention ကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်တစ်သံသရာ၏ပထမဦးဆုံး 8 ပတ်ကကိုအသုံးပြုပါ။
အခွားသောကာယဗလကဲ့သို့သောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ stacked ပါးစပ် Primobolan သံသရာလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် testosterone Propionate နှင့် Trenbolone Acetate, အလုပ်ပါဝင်ဒြပ်ပေါင်းများအားလုံးအဖြစ်များ၏ညှိနှိုင်းအထူးသဖြင့်ဝက်နေထိုင်ခဲ့စိုးရိမ်နေကြရှိရာ။ တချို့က testosterone အချို့ကိုပုံစံနှင့်အတူ Primobolan (ထိုပါးစပ်သို့မဟုတ်ထိုးဆေးတစ်ခုခု) ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး Winstrol (Stanozolol)ကပါးစပ် Primobolan နဲ့အတူလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါထိုးဆေးပုံစံ။ ဒါဟာတူညီတဲ့သံသရာအတွင်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပါးစပ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအသုံးပြုသွားမည်ဖို့မမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
ခံတွင်း Primobolan (Methenolone Acetate) ပုံမှန်အားဖြင့် 8 ရက်သတ္တပတ်ထက်မရှိတော့အဘို့ကို run ထားရမည်ကို၎င်း, ထိုးဆေးပုံစံ (Methenolone Enanthate) 10 ၏သံသရာအရှည်အတွက် run နိုင်ပါတယ် - (တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပန်းတိုင်များနှင့်အလိုဆန္ဒများပေါ် မူတည်. , ဒါမှမဟုတ်ပိုရှည်) 12 ရက်သတ္တပတ်။
Primobolan သောက်သုံးသော ပါးစပ်သို့မဟုတ်ထိုးဆေး: နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကျယ်ပုံစံကိုအသုံးပြုလျက်ရှိသည်ထားတဲ့အပျေါ၌မူတည်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးညွှန်း Primobolan တစ်ဦးပထမဦးဆုံးသောက်သုံးသောအဖြစ် 200mg ဖျောပွ dosages, ကုထုံး၏ပြီးပြည့်စုံသောကြာချိန်များအတွက်အပတ်တိုင်း 100mg နှင့်အတူလိုက်ကြ၏။ ကုသခံနေရဆေးပညာအခွအေနေအမှန်တကယ်အပြည့်အဝ Primobolan သောက်သုံးသောသည်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါအကွာအဝေးတိုင်းနှစ်ခုသုံးခုဖို့ရက်သတ္တပတ် 100mg မှဘယ်နေရာမှာမဆို 200mg ကနေတိုင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ် Primobolan ဆေးညွှန်းများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ 100 အဘို့ပဌနာ - မရှိတော့ 150 ထက်များအတွက်တစ်နေ့လျှင် 6mg - တသမတ်တည်းအသုံးပြုမှု 8 ရက်သတ္တပတ်။
ကာယဗလ, အားကစားသမားများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်သက်ဆိုင်ရာတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိသည်ထိုးဆေးပုံစံများအတွက်အစပြုသူ Primobolan ဆေးညွှန်းပုံမှန်တစ်ပတ်ကိုအကြောင်းကို 400mg မှာစတင်ပါ။ အလယ်အလတ် Primobolan ဆေးညွှန်း 400 ၏အကွာအဝေးအတွင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် - လုံလောက်တဲ့လုံလောက်သောဖြစ်သင့်သောတစ်ပတ်ကို 700mg, နှင့်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအ 800 သကဲ့သို့မြင့်မားသောစွဖြစ်နိုင်သည် - တစ်ပတ်ကို 1,000mg ။ တစ်ပတ်ကို 50mg - ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အနည်းငယ်မျှသာ virilization ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးသမီး Primobolan ဆေးညွှန်း 100 ၏အကွာအဝေးအတွင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုးဆေး Primo ဦးစားပေးပုံစံဖြစ်သောပါးစပ်မူကွဲထက်အမျိုးသမီးအားဖြင့်ဝေးလျော့နည်းမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိတယ်။
အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက် 50mg - အရင်ကဆိုရင်များအတွက်တစ်နေ့လျှင် 100mg, 100 - - အလယ်အလတ်အဘို့တစ်နေ့လျှင် 150mg နှင့် 150 ခံတွင်း Primobolan ဆေးညွှန်း 200 ၏အကွာအဝေးအတွင်းစတင်ဖို့။ တစ်နေ့လျှင် 50mg နှင့် virilization ၏နည်းနည်းအန္တရာယ်တင်ပြသင့်တယ် - အမျိုးသမီးပါးစပ် Primobolan ဆေးညွှန်းများသောအားဖြင့် 70 ၏အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
2 ရက်ပေါင်း - ၎င်း၏ဝက်ဘဝအကြောင်းကို3ဖြစ်သကဲ့သို့ခံတွင်း Primo, နေ့ကိုတလျှောက်လုံးဆေးညွှန်းတက်ခွဲဖို့မလိုအပျခနှင့်အတူတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။ ထိုးဆေး Primobolan7တစ်ဝက်ဘဝထားပါတယ် - ထို Enanthate Ester ကြောင့် 10 ရက်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်တည်ငြိမ်အသွေးအားပလာစမာအဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အညီအမျှခြားပြီးလှပတဲ့အသီးအသီးထိုးနှင့်အတူ, တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။
bulk သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် 5.Primo
Primobolan သည်စတီးရွိုက်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့“ လိုမျိုးအရာတွေမရှိဘူး။bulking steroid တစ်မျိုး"သို့မဟုတ်" အsteroid တစ်မျိုးဖြတ်တောက်အချို့သူများသည်အခြားရေများထက်ရေကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုအလေးချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်အလေးချိန် (ရေအလေးချိန်ပင်) ထည့်ရန်ရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်သင်၏အားသာချက်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ရှပ်အင်္ကျီလက်တွေကနေထွက်သွားတာလည်းပျော်စရာကောင်းတယ်။ သို့သော်ရေကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အမြောက်အမြားနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အစားအစာကိစ္စဖြစ်သည်။ Primo သည်ကိုယ်အလေးချိန်အားကိုယ်အလေးချိန်မတက်စေနိုင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ကယ်လိုရီများလာပါက၎င်းသည်ဖောင်းမပါဘဲအမြောက်အများသိုလှောင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆေးဖြစ်သည်။ (အချို့လူများက "ပိန်ကြုံသောအမြောက်အများ" ဟုခေါ်သည်) ။ ဟုတ်ပါတယ်, ကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုအတွက် Primo ကကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုဖန်တီးပေးပြီးပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အနည်းငယ်ကယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူတွေအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။
Primo သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်၊ ယောက်ျားအများစုသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အရာတစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားကြရပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာနှင့်မှမတူသောကြောင့် Primo သည်ပုံသွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆို အသုံးပြု၍ အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသန္ဓေတားဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ Primo နှင့်အတူယုတ္တိအကျဆုံးသောရွေးချယ်မှုသည် testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲသည်အရာခပ်သိမ်းနှင့်ကောင်းစွာတတ်ပြီးပေါင်းစပ်မှုသည်အနိုင်ရသည်။ အထူးသဖြင့် androgenic မဟုတ်သော (steroids အားလုံးကဲ့သို့ပင် testosterone မော်လီကျူးကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်သော်လည်း) Primobolan သည်အချို့သောဖိနှိပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် androgenic အရည်အသွေးသည်ဖိနှိပ်ရန်လုံလောက်ရုံသာမကခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လွှတ်လိုက်သောပမာဏထက်ပိုမိုထည့်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကိုယ်ပိုင်။ ဤသည် Primo ၏ဝေဖန်မှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများဆုံးကြီးထွားမှုအတွက်အချို့သော androgen elevation လိုအပ်သည်။ အင်ဒရိုဂျင်အစားထိုးမှုမရှိခြင်းနှင့်အတူသွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုသည်အနည်းငယ်သော libido ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းအနည်းငယ်ထည့်ခြင်းသည်ကြွက်သားထုထည်ပိုကြီးလာခြင်းနှင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုအလားအလာကိုတိုးပွားစေသည်။ Steroids နှစ်ခုလုံးသည်သံသရာမှသင်လိုချင်သမျှကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆေးထိုးနိုင်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုသိုလှောင်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မလိုအပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်“ kick start” ကိုသင်စတင်လိုသည်ဆိုပါက Primo သည်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်သောခံတွင်းဖြင့်အထူးကောင်းမွန်သည်။ Primoboaln ကို Dianabol နှင့်အသုံးပြုသောအခါ Primo အတွက်ခိုင်မာသောကြွက်သားများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် D-bol ၏ကန ဦး သက်ရောက်မှုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးပါ။ သို့သော်ပါးစပ်ကိုသုံးသောအခါအစဉ်မပြတ်သင့်လျော်သောအသည်းကာကွယ်မှုဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအသုံးပြုပါ။ (N2GUARD, Protein Factory POST-CYCLE နှင့် LIV 52) သည်အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာ - သုံးမျိုးလုံးကိုသုံးပါ။ ကောလဟာလများအရ Arnold သည်တစ်နေ့လျှင် Primobolin ၁၀၀ မီလီဂရမ်ရိုက်ချက်ကိုတစ်ရက်လျှင် ၂၅mg dianabol tabs နှင့်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းကို“ နေ့” တွင်စာအိတ်ကိုပြန်ပို့သည်ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်၊ သို့သော်ယနေ့ခေတ်စံနှုန်းများအရအတော်လေးနူးညံ့သည်။ ၎င်းသည်တော်တော်ကောင်းသော stack တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြန်အလှန်လေးစားကြပြီးနိုက်ထရိုဂျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့နှင့်အတူအရွယ်အစားနှင့်သွေးပမာဏကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
Primo သည်အန်ဒရိုဂျင်အရည်အသွေးနိမ့်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲအားနည်းမှုများကြောင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်အလွန်များပြားသောပမာဏနှင့်ရေထိန်းထားခြင်းကြောင့်ချောမွေ့မှုကိုရှောင်ရှားလိုကြသည်။ အက်စရိုဂျင်သည်ပျော့ပျောင်းသောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးပေးသောကြောင့်အက်တရိုဂျင်သည်အရသာရှိသည့်စတီရွိုက်များသူတို့ရရှိရန်ကြိုးစားနေသည့်ဗေဒကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။ မာကျောမှုမရှိဘဲမာကျောစေသည့်အပြင်အက်စထရိုဂျင်စုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်ဆေးဝါးတစ်ခုမှာမာစတာဆန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အမျိုးသမီးအများစုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားသည့်ပုလ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည် - ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်ကြီးထွားခြင်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောအသားအရေ၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံနှင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေဆုံး၊ Primo သည် anabolic သက်သက်သာဖြစ်သောကြောင့်သောက်သုံးသောဆေးများကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာထိန်းသိမ်းထားပါကဤနှစ်ဖက်စလုံးကိုအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည်။ အများအားဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၅၀-၁၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သောအမျိုးသမီးများသည်များသောအားဖြင့်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းရန်ပိုကောင်းသည်ဟုခံစားရသောပါးစပ်ဗားရှင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ဤမျှလောက်အကြံပြုရန်အထောက်အထားမရှိပါ၊ သို့သော်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေသာဓကမှာအချို့သောအရည်အချင်းမရှိဘဲမဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်အချို့အမျိုးသမီးများသည် Winstrol သို့မဟုတ် Anavar ကဲ့သို့သောအခြားခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဆေးဝါးများထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ကြသော်လည်း၊ များသောအားဖြင့် steroids များကိုရောနှောခြင်းသည်အကျိုးမရှိပါ။ မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုမသေချာသောကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည်။ Primoblan ကိုကြိုက်လျှင် Primobolan ကိုသုံးပါ။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်၊ များသောအားဖြင့် add-ons များမလိုအပ်ပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်ရေပန်းစားသောထောက်ခံချက်တစ်ခုမှာ Primobolan ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်မှလိုအပ်လျှင်ဒုတိယ steroid တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Primobolan နှင့်အတူနားလည်ရန်ပထမဦးဆုံးအရာက DHT (Dihydrotestosterone) ၏ပြုပြင်ထားသောပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတစ် DHT-ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကအတူအသုံးပြုသောကိုမဆိုထိုးမှာအီစထိုဂျင်သို့ (မွှေးကြိုင်) အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအပါအဝင်အများအပြားအလားတူဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ, သယ်ဆောင်။ ဒီအဆက်ဆက်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေသောအရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးနှစျသိမျ့တကယ်တော့ဖြစ်သင့် အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုရေ retention ကို၏ရလဒ်အဖြစ်ဖောင်း, gynecomastia, သွေးတိုး, အဖြစ်
Primobolan ၏ပါးစပ် format နဲ့ပါးစပ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအသည်းထိခိုက်မှုတစ်ဒီဂရီကိုတင်ပြစေရန်လေ့စေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်သည့် (စ methyl အဖြစ်လူသိများ) ကို C-17 အာလဖ Alkylated, ဖြစ်သော်လည်း Primobolan ကိုခန္ဓာကိုယ်မှမဆိုတိုင်းတာ hepatotoxic သက်ရောက်မှုပြတော့မှသိရသည်။ ပါးစပ် Primo အသည်းအပေါ်မည်သည့်တိုင်းတာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစည်းကြပ်ပါဘူးသော်လည်း hepatotoxicity အချို့ကိုသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုတင်ဆက်ကတိုးချဲ့သံသရာအရှည်နှင့် / သို့မဟုတ်အလွန်မြင့်မားဆေးညွှန်းမှကြွလာသောအခါဒီနေဆဲအထူးသဖြင့်, နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။ သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူ, ပါးစပ် Primobolan သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သူတစ်ဦးသွေးအားနည်းလူနာတစ်ဦးအသေခံသည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ နောက်တကြိမ်, ပါးစပ် Primobolan မြင့်မားဆေးများနှင့် / သို့မဟုတ်အလွန်ရှည်လျားသောသံသရာအရှည်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
အားကစားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများက Primobolan ကို“ နူးညံ့သော” anabolic steroid အဖြစ်သတ်မှတ်သည်နှင့်အမျှ၎င်းသည် endosterous Testosterone ထုတ်လုပ်မှုနှင့် HPTA လုပ်ဆောင်မှုကိုဖိနှိပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တကယ်တော့လေ့လာမှုများအရအလွန်နိမ့်ကျသောဆေးပမာဏ (နေ့စဉ် ၃၀ မှ ၄၅ မီလီဂရမ်) တွင်ပင်စမ်းသပ်သူများသည်သဘာဝ endogenous Testosterone ထုတ်လုပ်မှုကို ၁၅ မှ ၆၅% အထိဖိနှိပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောဆေးများထက်ပိုမိုနိမ့်သောကြောင့်၎င်းသည် Primobolan ကိုရပ်စဲပြီးနောက်သင့်လျော်သော PCT (Post Cycle Therapy) ကိုပြုလုပ်ရန်အကြီးအကျယ်အကြံပြုထားဆဲဖြစ်သည်။
9.Where မှ အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Primobolan ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်?
သင်အွန်လိုင်းအများအပြား Primobolan အမှုန့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်စစ်မှန်သော Primobolan ကုန်ကြမ်းအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသည်။ စျေးကွက်မှာအတုထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်း Primobolan ကုန်ကြမ်းမဝယ်တဲ့အခါမှာဒါသငျသညျတခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် realiable အရင်းအမြစ်.
8322 Views စာ
testosterone acetate အမှုန့်: သင်သည်ဤအမှုအရာမသိရပါဘူးလျှင်မသုံးပါကျေးဇူးပြုပြီး! Proviron သံသရာဖြတ်တောက်အတွက်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်